Paul Rand Logos: waa kuma, sifooyinka iyo qaar ka mid ah naqshadihiisa | Hal-abuurka khadka tooska ah
Calaamadaha Paul Rand
Nerea Morcillo | 12/04/2022 12:59 | Design Graphic, General
Nakhshad sawireed sidoo kale waa dhiirigelin, aqoon iyo waxbarasho. Si loo fahmo naqshadeynta, waxaa lagama maarmaan ah in la eego wixii la soo dhaafay oo lagu dhiirigeliyo kuwa guusha gaaray iyadoo lagu salaynayo sannado iyo sannado khibrad u leh qaybta.
Taasi waa ta keentay in qaar badan oo ka mid ahi aanay ku helin aqoonsi dedaal iyo dedaal badan, balse ay sidoo kale heleen mashaariic badan oo muddo ka dib u samaysmay qayb ka mid ah astaamaha iyo aqoonsiga shirkado badan oo maanta aynu ognahay.
Laakiin in laga hadlo naqshadeynta, Marka hore waa in aan xusno jaantus loo tixgeliyo aabaha naqshadeynta iyo farshaxanka, Paul Rand. Maqaalkan, kaliya kuma sheegi doonno sheekadiisa naqshadeeye, laakiin sidoo kale waxaan ku siin doonaa mashruucyo taxane ah oo isaga ka dhigay bartilmaameedka naqshadeeyayaasha badan.
1 Paul Rand: waa kuma?
2 shaqadiisa ugu wanagsan
3 Tixraacyo kale
Paul Rand: waa kuma?
Paul Rand Waxaa lagu qeexay inay tahay mid ka mid ah tusaalooyinka ugu sarreeya ee naqshadeynta garaafyada. Waxaa loo yaqaanaa naqshadeeye garaafyada ugu fiican ee waqtiga oo dhan. Waxa uu ku dhashay dalka Maraykanka, marka laga soo tago in uu hormuud ka ahaa naqshadaynta laantiisa ugu weyn, waxa uu sidoo kale caan ku yahay in uu yahay rinjiile, macalin, naqshadeeye warshadeed iyo farshaxan xayaysiis.
Waxa uu sidoo kale halbeeg u yahay in uu yahay abuuraha Dugsiga New York iyo shaqadiisa u horseeday inuu guulo caalami ah gaaro. Marka la soo koobo, isagu waa naqshadeeye ku dhiirigeliyay farshaxanka garaafyada qaab nololeed ahaan, iyo Hadda, waxaa jira farshaxanno badan, naqshadeeyayaasha iyo naqshadeeyayaasha oo ka kala yimid daafaha dunida kuwaas oo u qaata inay tixraac ka dhigtaan mashaariicdooda, gaar ahaan kuwa aqoonsiga shirkadeed.
Wuxuu ku dhashay Brooklyn 1914, qoyskiisa waxaa loo tixgeliyey inay tahay mid gaar ah sababtoo ah waxay ahayd mid diineed heersare ah, Yuhuuda iyo Ortodokska, taasoo keentay mamnuucida iyo diidmada sawirada. Laakiin waxa uu damcay in uu ku soo baxo wax aan cilmi ahayn ama xarfo, sidaa awgeed isaga oo aad u yaraa waxa uu bilaabay in uu nashqado boodhadhka qaar ka mid ah dhacdooyinka dugsigiisa. Sidaas ayuu waalidkii ugu oggolaaday in uu wax barto oo uu wax ka barto fanka.
Laga soo bilaabo da'da aad u yar, wuxuu mar hore u soo muuqday naqshadeeye iyo farshaxan, maadaama qaar ka mid ah majaladaha caanka ah ee magaaladiisa ay u wakiisheen mashaariic waaweyn oo loogu talagalay naqshadeynta daboolkooda. Taasi waxay ahayd sida Paul Rand u koray weynaaday iyo sameeyey meel muhiim ah dunida design ahSi aad u badan, in ay u qoondeeyeen sida saameynta ugu weyn ee naqshadeynta Maraykanka.
Sannado ka dib, shirkado badan ayaa rabey inay la xiriiraan isaga si ay u horumariyaan sumcadda shirkadooda iyo warbaahinta xayeysiiska. Sababtaas awgeed, Wuxuu go'aansaday inuu qaado waddo cusub oo naftiisa u huro naqshadeynta astaanta. Si tan loo sameeyo, waxa uu adeegsaday qaababka joomatari qaarkood kuwaas oo uu ku dhiirigaliyay mashruucyadiisa calaamadaynta oo uu ku kor saaray iyaga oo ujeedadoodu tahay in la abuuro calaamad nadiif ah, oo aan aad u mashquulsanayn oo si sahlan loo aqoonsan karo. Sidan ayaa shirkadaha qaar u qeexeen Paul Rand.
shaqadiisa ugu wanagsan
Haddii Paul Rand uu u istaagay wax, waxay ku jirtaa naqshadeynta astaanta. Sababtan awgeed, Henry Ford wuxuu u doortay Paul Rand inuu yahay naqshadeeyaha ugu muhiimsan inkastoo uusan rabin inuu naqshadeeyo. Si taas loo sameeyo, naqshadeeyuhu wuxuu doortay naqshad shaqeyneysa oo caadi ah waqtigaas, aan xasuusano in astaanta iyo naqshadeeda ay ku yaalliin gaar ahaan 70-meeyadii, waqti lagu buuxiyey baabuur weyn iyo dhaqdhaqaaqyo tignoolajiyadeed.
Tani waa sida Paul Rand uu noqday mid aad ugu habboon taariikhda naqshadeynta, maadaama uu qayb ka ahaa mid ka mid ah shirkadaha baabuurta ee ugu waaweyn taariikhda, taas oo wakhtigaas loo aqoonsaday inay tahay tan ugu muhiimsan.
Paul Rand wuxuu kaloo qayb ka ahaa naqshadaynta waxa hadda la aqoonsan yahay sida shirkadda tignoolajiyada caalamiga ah ee Maraykanka iyo la-talin ku salaysan Armonk, New York. Shaki la'aan, naqshaddu waa mid shaqaynaysa. Waxay ilaalinaysaa xariiqeeda garaafka iyo qaabkeeda joomatari oo leh qaabab joogto ah oo fudud.
Abuuritaanka astaantan iyo isticmaalka midabka shirkadu waxay ahayd guul labadaba shirkadda iyo xirfaddiisa farshaxan iyo naqshadeeye sumadda.
Westinghouse waa shirkad koronto oo Pennsylvania ah. Shirkaddani waxay sidoo kale dooratay oo heshay baahida loo qabo in la abuuro calaamad. Si taas loo sameeyo, Paul Rand wuxuu u degay shaqada iyo, ilaalinta bilicda wax-dhisaysa oo leh qaabab joomatari, waxa ay go'aansatay in ay samayso calaamad sawirkeedu uu ka muuqdo bilawga shirkadda oo leh qaabab sida goobo ama dhululubo.
Waxay ahayd mid kale oo ka mid ah calaamadaha ku guuleystay aqoonsiga weyn ee warshadaha naqshadeynta iyo maanta waa mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan. Shaki la'aan, mid kale oo ka mid ah shaqadiisa quruxda badan oo shaqo si fiican loo qabtay ay ka muuqato.
Shabakadda caanka ah ee telefishinka ABC waxay sidoo kale ahayd mid ka mid ah noocyada iyo shirkadaha u baahan aqoonsi cusub. Sababtan awgeed, Paul Rand wuxuu ku biiray tacabur kale oo cusub. Markan waxa uu doortay weji wareegsan oo aan dayicin dareeraha iyo diirimaadka in uu noqdo qaab joomatari. Iyada oo ay taasi jirto, waxa uu doortay goobaabin si fiican loo dhisay oo nashqadeeyay oo uu u adeegsaday sida qaybta ugu muhiimsan ee astaanta.
Shaki la'aan, waa mid kale oo ka mid ah naqshadaha ugu quruxda badan ee xirfaddiisa naqshadeeye.
Haddii aan ku bilowno liiskan qaar ka mid ah tixraacayaasha kale ee sidoo kale sameeyay taariikhda, waxay noqon doontaa Saúl Bass iyada oo aan shaki lahayn. Waa nashqadeeye boodhadh ah oo uu dhiirigeliyay shineemo Hollywood iyo xiddigaha waaweyn. Waxa uu ahaa kacaan ku dhex jiray warshadaha filimada, isaga oo naqshadeeyay qaar ka mid ah credits filimada. Shaqooyinka ay ka midka yihiin Ninka Qoriga Dahabka ah wata, "Tijaabada ayaa ku nool Dabaqa sare", "Vertigo", "Anatomy of Murder", "Sheekada Dhinaca Galbeedka", "Psychosis" ama "Spartacus" ayaa taagan. Marka la soo koobo, naqshadeeye saameyn ku yeeshay filim sameeyayaasha iyo farshaxanada waaweyn.
Waa mid ka mid ah naqshadeeyayaasha iyo farshaxan-yaqaannada adduunka oo dhan caan ku ah naqshadayntiisa. Waxa uu ahaa abuuraha astaanta caanka ah ee magaalada New York in dad badan oo dalxiisayaal ah ay xidhaan shaadhkooda marka ay soo booqdaan magaalada. Waxa kale oo uu caan ku yahay matalida Bob Marley, sidaas darteed naqshadaynta iyo abuurista sawir ay ka buuxaan midabyo iyo siyaabo kala duwan. Isagu waa mid ka mid ah naqshadeeyayaasha kuwaas oo lagu garto isticmaalka midabyo muuqda oo muuqda. Haddii waxa aad raadinayso ay tahay waxyi, waa mid ka mid ah tixraacyada ugu weyn ee aad u sameyso si aan shaki lahayn.
Isagu waa aabaha naqshadeynta grunge, oo ah mid kale oo ka mid ah farsamooyinka ka kooban naqshadeynta garaafyada. Qaabkiisa waxa lagu gartaa in lagu soo raray qaabab badan, hannaan ka soo jeeda farta aan caadi ahayn oo soo jiidasho leh, midabyo iyo kala duwanaansho chromatic ah oo aad u firfircoon hab uu u sameeyo oo uu u qaybiyo curiyayaasha garaafka ee uu u isticmaalo si qurux badan. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah tixraacyada ugu wanaagsan kuwa hadda bilaabaya ee u baahan kobcinta hal-abuurka iyo dhiirigelinta. Intaa waxaa dheer, wuxuu sidoo kale caan ku yahay qaar ka mid ah shaqooyinkiisa, sida xayeysiisyada noocyada sida Pepsi, Budweisser ama Xerox.
Javier Mariscal waa naqshadeeye garaafeed Isbaanish ah, oo caan ku ah inuu ahaa abuurihii Ciyaaraha Olombikada ee Barcelona 92. Shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah summeynta, boodhadhka, sheeko-yaqaanno garaafyo, animation, shaneemo, dhismo, baakad, iwm. Isagu waa mid ka mid ah farshaxannada iyo naqshadeeyayaasha ugu ballaaran tan iyo markii uu taabtay meelo kala duwan oo naqshadeynta ah. Waxa kale oo ay leedahay qiimo halabuureed oo sarreeya, mar haddii ay shaqadiisu ku sifoobeen xarfaha iyo curiyayaasha ama sawirrada uu mid walba ku isticmaalo. La yaab maaha in uu sidoo kale yahay mid kale oo ka mid ah tixraacyada Isbaanishka ee weyn, kaas oo ku guuleystay inuu naga dhigo dhammaan jacaylka.
Pepe Gimeno waa mid kale oo ka mid ah naqshadeeyayaasha Isbaanishka ee ku guuleystay abaalmarinta tixraaca ugu sarreeya iyo wakiilnimada. Hubaal inaad maqashay isaga, maadaama uu yahay abuuraha geedka caanka ah ee caanka ah ee dalxiiska ee ka kooban qaybta dalxiiska ee Bulshada Valencian. Geedka timirta ah ee lagu buuxiyey midabyo, mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa ay u taagan yihiin dhaqanka, cimilada, taariikhda iyo dhaxalka mid ka mid ah bulshooyinka ugu wanaagsan Spain. Waxa uu sidoo kale caan ku yahay naqshadihiisa aadka ugu yar iyo kuwa hoose. Marka la soo koobo, tusaale weyn oo aad wax yar ku sheegi karto wax badan.
Waxaa jira naqshadeeyayaal iyo naqshadeeyayaal badan oo qayb ka ahaa taariikhda. Waxaa ka mid ah, Paul Rand wuxuu ahaa mid ka mid ah tixraacyada ugu weyn dhammaanteen. Waxa aan shaki ku jirin in hawshiisu ay astaameeyeen hor iyo gadaalba, mid walbana uu leeyahay macne iyo qaab ka dhigaya mid shaqaynaysa oo asalkiisu yahay.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay naqshadeeye iyo fanaankan weyn. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii waddo raadinta qaar ka mid ah shuqulladiisa, kuwaas oo wadartoodu ay ku dhowdahay 250. Waxaa ka mid ah calaamado iyo sawirro. Waxaan sidoo kale rajaynaynaa in tixraacyada qaarkood ee aan tilmaannay ay ku dhiirigelin doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Calaamadaha Paul Rand